Farqiga u dhaxeeya miraha la cuno iyo in casiir laga sameeyo – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Farqiga u dhaxeeya miraha la cuno iyo in casiir laga sameeyo
Dadku waxay aaminsan yihiin in cabitaanka casiirka miraha dabiiciga ahi u wanaagsan yahay caafimaadka, gaar ahaan markay iska ilaaliyaan ku darista sonkorta, laakiin ma aha mid ku habboon sida aan filayno, maxaa yeelay caadadani ma aha mid aan dhib lahayn. ee waxay leedahay dhib.
Sida laga soo xigtay cilmibaaraha Mareykanka ah iyo khabiirka caafimaadka, Christopher Bird, cunista miraha sida caadiga ah, taasi waa, way ka caafimaad badan tahay marka midhaa la shiido ama casiirka, aad ayey uga wanaagsan tahay cabitaanka casiirka, xitaa haddii ay jilicsan tahay oo si fiican loo tuujiyey.
Wuxuu sharraxay in cabitaanka casiirku uu ka xun yahay dhinaca caafimaadka marka loo eego cunista miraha, sababtuna waxaa ku jirtaa sonkorta, iyadoo ay wax yeelo u leedahay casiirka lagu daro sonkorta, xitaa ka aan lagu darin sonkor ayuu khabiirku sheegaya in wax yaalo leedahay.
Qaarkood waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inay fahmaan arrintan, gaar ahaan maadaama isha casiirku lafteedu tahay midho, laakiin khabiirku wuxuu sharraxayaa sababta ay ugu kala duwan yihiin qiimaha nafaqada iyo caafimaadka.
Aqoonyahankan oo ka soo shaqeeyay Jaamacadda Texas, ayaa sheegay in diirka iyo saxarka midhaha ay ku jiraan nafaqooyin muhiim ah sida Fibre, kuwaas oo muhiim u ah fududeynta jirku inuu ka takhaluso waxyaabaha qashinka keena.
Marka, qofku markuu cuno miro, fiilooyinka cuntada ee ku jira saxarka midhaha, taas oo ah, unugyada adag, waxay ka shaqeeyaan xakamaynta sonkorta dabiiciga ah, markay marayso dariiqa ay ku jirto nidaamka dheef-shiidka.
dhanka kale, sonkorta dabiiciga ah ee ku jirta miraha ayaa la nuugay, muddo dheer, si loogu beddelo tamar waxtar leh.
hadii aan ka warano Dhinaca kale, cabitaanka casiirka miraha waxay keeneysaa kor u kac degdeg ah ee heerka sonkorta dhiigga, sidaas darteed heerkani wuxuu ka sarreeyaa sida jidhku u baahan yahay.
Markay tan dhakhso u dhacdo, jirku wuxuu sameeyaa insulin, qadar badan oo sonkor ah ayaa loo beddelaa baruur iyo glycogen.
Maaddaama sonkorta ay ku kacdo jirka xawligan degdegga ah, qofku wuu sii gaajoon doonaa, sidaas awgeed, wuxuu cuni doonaa cunto badan.
Khabiirka ayaa sheegay in dadka la ildaran hypoglycemia ay la soo dersi karaan madax xanuun iyo cuncun ka dib cabitaanka casiirka, halka astaamahan aysan soo bixin marka ay cunayaan miraha.
Daraasad lagu daabacay wargeyska Mareykanka, Clinical Nutrition, oo ku takhasusay nafaqada caafimaadka, tijaabo ayaa lagu sameeyay si loola socdo farqiga u dhexeeya cabitaanka casiirka iyo cunista miraha oo dhan.
Laakiin markaad sonkor ku darto casiir ama laga yaabee kareem iyo caano dufan badan, waxay ku sii xumaaneysaa xaaalada caafimaadka ee aan sheegeyno.
Previous articleQaar ka mid ah odhaahyada Sh.Mustafe XAAJI Ismail
Next articleThe difference between eating fruits or making juice